Xaal Caafimaadeedka Abwaan Sangub oo Maraysa Taataabo oo talo waa tii rabaa Timidee – Xeernews24
Xaal Caafimaadeedka Abwaan Sangub oo Maraysa Taataabo oo talo waa tii rabaa Timidee
Waxaa ka soo reyneysa xaaladda Caafimaad ee Abwaan Max’uud C/llaahi Ciise (Sangub) oo maalmahaan ku xanuunsanayey Isbitaalka Erdogan ee magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin ay ka mid yihiin Marwada Madaxweynaha Soomaaliya Marwo Qamar Cumar Cali, afhayeenka Golaha Abwaanada Soomaaliyeed ahna agaasimaha Radio Kulmiye Abwaan Cismaan C/llaahi Guure wasiiro hore iyo Wariyeyaal ayaa maanta ku booqday abwaan Sangub isbitaalka Erdogan ee uu ku jiro.
Abwaan Sangub oo la hadlay wafdigii Maanta Isbitaalka ku booqday ayaa sheegay inuu Caafimaad qabo isla markaana xaaladiisa ay sidii hore dhaanto.
“ILAAHAY waa ii aqbalay ducadii ay ii soo duceeyeen Ummadda Soomaaliyeed, meeshiina ka sii wada ayaan leeyahay ducada” ayuu yiri abwaan Sangub.
Dhinaca kale, Abwaan Guure ayaa si kulul uga hadlay warar lagu baahiyey baraha bulshada oo sheegayey inuu geeriyooday abwaan Sangub.
“Naceyb looma dhinto Jaceylna laguma waaro, waxaan ula jeedaa dadka ku faafinaya facebook Abwaan Sangub baa dhintay maxey ka helayaan beenta waa yaabe? Abwaan Sangub waqtigiisa ka hormari maayo, haddana Xaaladiisa Caafimaad Waa soo hageeysaa, Maantana Waxaa Booqday Marwada Madaxweynaha Qamar Cumar Cali iyo Madax kale oo la socotay, haddaba Dadka Beenta Faafinayow ALLAAH ka xishooda” ayuu yiri abwaan Guure oo rajo wanaagsan ka muujiyey in abwaan Sangub laga soo saaro Isbitaalka maalmaha soo socda.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/guure3.jpg 427 640 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-07 04:26:302016-10-07 04:26:30Xaal Caafimaadeedka Abwaan Sangub oo Maraysa Taataabo oo talo waa tii rabaa Timidee
Masuul British ah oo lagu feedhay xarunta Baarlamanka Midowga Yurub (Daawo ... Dagaal Gaalkacyo ku dhexmaray Puntland iyo Galmudug